Inona izao nataonao izao? Le 29 Janvier 35 pages. Fa efa namidiny izahay sady nohaniny lalandava ny volanay rehetra. Hafeniko amin’i Abrahama va izay hataoko? Ireo no zanak’i Esao, izay naterany tany amin’ny tany Kanana. Efa lasan’i Jakoba avokoa izay rehetra nananan’ny raintsika; ary avy tamin’ny fananan’ny raintsika no nahazoany izao voninahitra rehetra izao.
Inona izao nataonao tamiko izao? Andriamanitra efa nitsinjo ny fahoriako sy ny fisasaran’ny tanako ka nananatra anao halina. Nanonofy aho, koa tsy misy mahalaza ny heviny; ary izaho nahare fa ianao, hono, raha mandre nofy, dia mahalaza ny heviny. Chapitre 30 1 Ary rehefa hitan-dRahely fa tsy mba niteraka tamin’i Jakoba izy, dia nialona ny rahavaviny izy, ka hoy izy tamin’i Jakoba: Efa namono lehilahy aho noho ny feriko, Ary tovolahy noho ny faharatrako. Ireo no loham-pireneny pd tamin’i Elifaza tany amin’ny tany Edoma; ireo no zanak’i Ada. Moa ho avy tokoa va aho sy ny reninao ary ny rahalahinao ka hiankohoka amin’ny tany eo anatrehanao?
Atopazy ny masonao, ka hatramin’ity tany itoeranao ity dia mitazana mianavaratra sy haiboly ary miantsinanana sy miankandrefana; 15 fa ny tany rehetra izay tazanao dia homeko anao sy ny taranakao mandrakizay. Inona izao nataonao izao? Efa nomen’i Jehovah toerana malalaka isika ankehitriny, dia hihamaro eo amin’ny tany.
Chapitre 11 1 [Ny nanaovan’ny olona ilay tilikambo tao Babela, sy ny nanorokoroan’Andriamanitra ny fitenin’ny olona] Ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny. Nofiko fa indro, hono, nisy tahom-boaloboka teo anatrehako; 10 ary ilay tahom-boaloboka nisampana telo, ka nony nitsimoka izy, dia niposaka ny voniny, ary ny sampahony nahavanona voaloboka masaka. Chapitre 34 1 [Ny nakan’i Sekema an’i Dina sy ny baibolly Simeona sy Levy izany] Dia nivoaka Dina, zanakavavin’i Lea, izay naterany tamin’i Jakoba, mba hizaha ny zazavavy tompon-tany.
Angamba halainao an-keriny amiko ny zanakao-vavy. Hiteraka tokoa va aho, kanefa izao efa antitra izao? Dia niala teo anatrehan’i Farao Josefa ka nandeha nitety ny tany Egypta rehetra. Izany no nanaovany ny anarany hoe Galeda. Jehovah Tompo ô, inona no homenao ahy? Tsia, tompokolahy; fa tonga mba hividy hanina ny mpanomponao.
Misotroa, biboly hampisotroiko koa ny ramevanao; dia nisotro aho, ary nampisotro ny rameva koa izy. Marina noho izaho izy, satria tsy nomeko ho vadin’i Sela zanako. Andriamanitra efa nampanadino ahy ny fahoriako rehetra sy izay rehetra tao an-tranon’ny raiko. Tsy misy fahatahorana an’Andriamanitra tokoa amin’ity tany ity, ka hovonoin’ny olona aho noho ny amin’ny vadiko. Soraty izay tena mba tianao ao an- trano na rehefa ao an-trano.
Omeo ahy ny olona, fa ny fananana ento ihany ho anao. Vadio ny vadin’ny rahalahinao, ka ento loloha izy, dia velomy maso ny rahalahinao. Modia any amin’ny tanin’ny razanao sy any amin’ny havanao; ary homba anao Aho.
Mba areno kely ny sininao hisotroako, ka hamaly hoe izy: Taolako sy nofoko tokoa ianao. Tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin’ny olona ny Fanahiko, fa amin’ny faniavany dia nofo izy; nefa ho roa-polo amby zato taona ny androny.
Izany no famantarana ny pvf izay naoriko ho amiko sy ho amin’ny nofo rehetra ambonin’ny tany.
Efa nahazo zazalahy tamin’i Jehovah aho. Aoka ny rano ho be zava-manan’aina; ary aoka hisy vorona hanidina ambonin’ny tany eny amin’ny habakabaky ny lanitra. Ho tahaka izany ny taranakao. Aza manota amin’ny zaza?
Fa tsy fantatr’i Jakoba fa Rahely no efa nangalatra azy. Chapitre 6 1 [Noa sy ny Safo-drano] Ary raha vao nihamaro ny olona tambonin’ny tany ka teraka zazavavy maro, 2 dia hitan’ny zanak’Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin’ny olona; ka dia nifidy vady ho azy tamin’izy rehetra araka baibolly tiany izy. Chapitre 2 1 Dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy.
Aoka mba hahita fitia eto imasonareo aho, ary izay lazainareo amiko dia homeko; 12 na dia harena be sy zavatra betsaka aza no asainareo homeko, dia homeko ihany araka izay holazainareo amiko; fa omeo ahy ny zazavavy ho vadiko.
Hitako ny tarehin’ny rainareo, fa tsy mba miramirana amiko tahaka ny taloha; fa Andriamanitry ny raiko no efa nomba ahy. Indro, efa nataoko ho tomponao izy, ary ny rahalahiny rehetra nomeko ho mpanompony; ary vary sy ranom-boaloboka no namelomako azy; koa inona indray no hataoko aminao, anaka?
Miaingà, ento ny vadinao sy ny zanakao roa vavy izay eto, fandrao mba haringana ianao noho ny heloky ny tanàna. Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany, ka mampanompoa azy; ary manjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin’ny tany.
Mankanesa any amin’i Josefa; ary izay holazainy aminareo dia ataovy.